လစ်ဗျားတွင် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား ၂၆ ဦး အသတ်ခံခဲ့ရမှုူလူကုန်ကူးသူများအပါအဝင် ၃၈-ဦးကို ဘင်္ဂလားဒက် စီအိုင်ဒီ ဖော်ထုတ်တရားစွဲဆို။ ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်နိုင်ငံသားများ အသတ်ခံရမှု၌ တာဝန်ရှိသူ လစ်ဗျားပြည်သူ့စစ် ခါလစ်မူဆာအီမှာ ထရီပိုလီအစိုးရ၏ ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုတွင် သေဆုံးကြောင်း သတင်းထွက် – H2Oupdatenews
လစ်ဗျားတွင် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား ၂၆ ဦး အသတ်ခံခဲ့ရမှုူလူကုန်ကူးသူများအပါအဝင် ၃၈-ဦးကို ဘင်္ဂလားဒက် စီအိုင်ဒီ ဖော်ထုတ်တရားစွဲဆို။ ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်နိုင်ငံသားများ အသတ်ခံရမှု၌ တာဝန်ရှိသူ လစ်ဗျားပြည်သူ့စစ် ခါလစ်မူဆာအီမှာ ထရီပိုလီအစိုးရ၏ ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုတွင် သေဆုံးကြောင်း သတင်းထွက်
oungmarine11@outlook.com 03/06/2020	7 Comments
လစ်ဗျားနိုင်ငံတွင် လူကုန်ကူးခံခဲ့ရသော ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား၂၆-ဦး တို့ အသတ်ခံရမှု နှင့် ဆက်စပ်၍ ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်မှု့ခင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဋ္ဌာန ( CID ) က စုံစမ်းဖော်ထုတ်ခဲ့ရာ ၃၈-ဦးကို အမှု ဖွင့်ထားခဲ့ကြောင်း၊ သေဆုံးသူတို့၏ ရုပ်အလောင်းများကို နိုင်ငံတကာရွှေပြောင်းသွားလာမှုဆိုင်ရာအဖွဲ့ (IOM) အကူအညီဖြင့် ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်သို့ ပြန်လည်သယ်ယူမည်ဖြစ်ပြီး၊ သေဆုံးသူများအတွက် လျှော်ကြေးတောင်းခံရန် စီစဉ်ခဲ့သည်ဟု Dhaka Tribune က ယနေ့ရေးသားသည်။
၎င်းတို့အနက် အမည်မဖော်လိုသူ ၈ ဦး မှ ၁၀ ဦးတို့မှာ လူကုန်ကူးမှု တားဆီးနှိပ်ကွပ်ရေး အက်ဥပဒေဖြင့် တရားစွဲဆိုခြင်းခံရသူများဖြစ်ကြောင်း၊ အသတ်ခံရမှုနှင့် ဆက်စပ်သည်ဟု CID က ဖမ်းဆီးထားသူများနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည်ကို မသိရသေးကြောင်း ပယ်လ်တန်ရဲတပ်ဖွဲ့က အင်္ဂါနေ့ည၌ ပြောဆိုသည်။
လွန်ခဲ့သည့် မေလ ၂၈-ရက်နေ့တွင် ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားဆဲ လစ်ဗျားနိုင်ငံ၌ ထရီပိုလီမြို့တောင်ဖက် မိုင် ၁၁၀-ခန့် အကွာ လူသူစွန့်ပစ်ထားသော မစ်ဇဒါမြို့၌ လူကုန်ကူးသူအချု့ိက သေနတ်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ အဆိုပါ တိုက်ခိုက်မှုအတွင်း ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်နိုင်ငံသား ၂၆-ဦး သေဆုံးပြီး အခြားနိုင်ငံသား ၁၁-ဦးတို့ ဒါဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။ သို့သော် ရုပ်အလောင်းအားလုံးကို လစ်ဗျားနိုင်ငံ မစ်ဇ်ဒါခရိုင်၌ပင် သြင်္ဂိုဟ်ခဲ့ရသည်ဆို၏။
လစ်ဗျားနိုင်ငံတွင် ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်နိုင်ငံသားများ အသတ်ခံခဲ့ရမှု၌ အဓိကတာဝန်ရှိသူမှာ ခါလစ်အယ်မူဆာအီဖြစ်ကြောင်း၊ တိုဘရုခစင်ပြိုင်အစိုးရ LNA တပ်မတော် စစ်ဘုရင် ခလီဖာဟဖ်တာ၏ လက်ရုံးတစ်ဦးဖြစ်သူ ခါလစ်သည် ဒေသန္တရပြည်သူ့စစ်ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း၊ မြို့တော်မှ မိုင် ၅၀-ခန့်အကွာ ဂါယန်မြို့ကို လစ်ဗျားထရီပိုလီအစိုးရက ဒရုန်းများအသုံးပြု၍ ယမန်နေ့ လေကြောင်းမှ တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာတွင် ခါလစ်အယ်မူဆာအီ သေဆုံးသွားပြီဖြစ်ကြောင်း ထရီပိုလီအခြေစိုက် The Libya Observer က ရေးသားသည်ဟု Dhaka Tribune ၏ ယနေ့ဖော်ပြသော သတင်းတစ်ပုဒ်တွင် တွေရှိရသည်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှအစိုးရသည် လူကုန်ကူးသူများနှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကိုလည်း ရှာဖွေခဲ့ပြီး၊ လူကုန်ကူးခြင်းနှင့် သတ်ဖြတ်ခြင်းတွင်ပါ၀ င်သူများကို ဖမ်းဆီးအပြစ်ပေးနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
စနေနေ့တွင် အသတ်ခံရသူတို့၏ အမည်စာရင်းကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ရာ ခရိုင် ၆ -ခုမှ လူ ၂၃-ဦးတို့ပါဝင်သည်။
(( ယခုသတင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်ကို “ လစ်ဗျားပြည်တွင်းစစ် ဘင်္ဂလားဒက်ရှ် နိုင်ငံသား ၂၆-ဦး အသတ်ခံရကြောင်း ထရီပိုလီ အစိုးရပြောဆို။ အာဖရိကတိုက်သား အခြားရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား ၄-ဦးအပါ အဝင် လူ ၃၀ အသတ်ခံရ” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ( မေ – ၂၉၊ ၂၀၂၀ ) ၌ ကျွန်တော် ဘာသာပြန်ဆိုဖော်ပြခဲ့ရာ ပထမ ဆုံး ကောမန့်တွင် ဖတ်ရှု့နိုင်ပါသည်။ ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်များ အသတ်ခံရခြင်းမှာ လစ်ဗျားလူကုန်ကူးသူ မိသားစု၏ လက်ချက်ဖြစ်ကြောင်း ကနဦးသတင်းများ၌ တွေ့ရှိရသည်။ ။ သတင်းဘာသာပြန်သူ ))
((( Dhaka Tribune., June 3, 2020, “ CID files case against 38 over the death of 26 Bangladeshi migrants in Libya . By: Abdullah Alif ” ကို #HtayOung, #OungMarine ဆီလျော်အောင် ကောက်နှုတ် ဘာသာပြန် ဆိုသည်။ )))
7 Replies to “လစ်ဗျားတွင် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား ၂၆ ဦး အသတ်ခံခဲ့ရမှုူလူကုန်ကူးသူများအပါအဝင် ၃၈-ဦးကို ဘင်္ဂလားဒက် စီအိုင်ဒီ ဖော်ထုတ်တရားစွဲဆို။ ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်နိုင်ငံသားများ အသတ်ခံရမှု၌ တာဝန်ရှိသူ လစ်ဗျားပြည်သူ့စစ် ခါလစ်မူဆာအီမှာ ထရီပိုလီအစိုးရ၏ ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုတွင် သေဆုံးကြောင်း သတင်းထွက်”
28/07/2020 at 6:57 PM
Unquestionably consider that that you stated. Your favorite justification seemed to be at the internet the easiest thing to take
note of. I say to you, I definitely get annoyed at the same time as folks consider issues that they plainly do not realize about.
Stop by my blog … CBD for sale
may come back in the future. I want to encourage one to continue your great work, haveanice evening!
Previous Previous post: Facebook တွင် သတင်းရေးသားလွှင့်တင်သော မီဒီယာသည် သတင်းပို့စ်အောက်တွင် ဖော်ပြသော အသရေဖျက်ရာရောက်သည့် ကောမန့်များအတွက် တာဝန်ရှိကြောင်း တရားရုံးဆုံးဖြတ်။
Next Next post: ၀န်ကြီးချုပ်၏ တိုက်ရိုက် လမ်းညွှန်ချက်အရ ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်နယ်ခြားစောင့်တပ်တွင် ခေတ် မီလက်နက်နှင့် စက်ကိရိယာတပ် မြန်နှုန်းမြင့် ကြားဖြတ်ရေယာဉ်ငယ်များ စတင်အသုံးပြု။ ၂၀၁၉-ခုနှစ်မှ စ၍ စိန့်မာတင်ကျွန်းလုံခြုံရေး ဝန်ကြီးချုပ်လက်အောက်သို့ BGB အား ထည့်သွင်းခဲ့